Wax sagxad la dhaho ma jiraan ee shacabka ha loo gurmado - Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Wax sagxad la dhaho ma jiraan ee shacabka ha loo gurmado - Rooble
Jubbooyinka oo xilli ka mid ahaa, gobollada ugu dihan Soomaaliya, ayaa hadda wajahaya cawaaqib xumada ka dhalatay ka ganacsiga dhuxusha, taas oo saamayn taban ku yeelatay habnololeedka iyo sugnaanta cuntada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ra’iisul Wasaaraha XFS, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa qaar ka mid ah Wasaaradaha Xukuumaddiisa ku amray in ay u diyaar garoobaan gacan siinta shacabka gobollada Jubbooyinka ee aabrtu ku dhufatay, kuwaas oo si daran looga soo deyrinayo xaaladdooda nololeed.
Wasaarahadaha kala ah, Gargaarka, iyo Caafimaadka, ayuu ku amray in ay u istaagaan, garab qabashada dadka dan-yarta ah ee tabaaleysan, halka uu Wasiirka Maaliyadda u sheegay in aysan jirin wax sagxad la dhaho, oo Dowladdu ay heysato, lacagta mushaaraadka iyo xuquuqaadka kale, ilaa bisha April ee sanadka soo socda.
“Jubbaland xaalad adag oo abaar iyo biyo la’aan ah ayaa ka jirta, haddii aysan Roob ama gargaar deg deg ah aysan helin, waxa ku soo wajahan xaalad halis ah, sidaas-dareedded, Wasaaradaheygu ha u diyaar garoobaan, sidii gobolladaas gacan loo siin lahaa”. Ayuu yiri Rooble.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, oo hore u sheegay in ay jirto dhaqaalo la’aan daran, ayuu dhankiisa ku amray inuu qasnadaha u furo shacabka reer miyiga ah, ee abaartu ku dhufatay.
“Wasiir Bayle, waa i hor fadhiyaa, wax sagxad la dhaho ma jirto, mushaaraadka waan heysannaa, ilaa April sanadka soo socda, waa in aan dhexda u xiranna oo aan caawinnaa walaalaheen ay abaaruhu saameeyeen sida ugu dhaqsiyaha badan”. Ayuu yiri sidoo kale,RW Rooble.
Xaaladdii ugu xumeyd ayaa ka taagan Jubbooyinka iyo Gedo, Wasiirka Wasaaradda Xannaanada Xoolaha Jubbaland, Maxamed Nuur Cali, oo dhawan warbaaahinta la hadlay, ayaa sheegay in ku dhawaad, 35 kun oo neef ay galaafatay, abaarta daran ee ka jirta gobollada Jubbooyinka ee koofurta Soomaaliya.
Biyo iyo baad la’aan middii ugu darneyd ayaa ka taagan degaanno dhaca Jubbaland, taas oo horseedday, dhimashada in ka badan 22 kun oo lo’ ah, Sagaal kun oo Geel ah, 2700 oo Ari ah iyo 300 oo Dameerro ah.